“Trump waxa uu halis ku yahay Dadka & Dalka Mareykanka” Ilhaan Cumar. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta “Trump waxa uu halis ku yahay Dadka & Dalka Mareykanka” Ilhaan Cumar.
“Trump waxa uu halis ku yahay Dadka & Dalka Mareykanka” Ilhaan Cumar.
Ilhaan Cumar oo xubin ka ah Kongareeska Mareykanka isla markaana khilaaf xooggan uu kala dhaxeeyo Madaxweynaha Xilka kasii degaya ee Donald Trump waxa ay ka hadashay sababta keentay Rabshadda ka dhacday Dhismaha Capitol Hill.
Xildhibaan Ilhaan ayaa Madaxweyne Trump ku eedeysay in uu yahay Nin halis ku ah Dadka & Dalka Mareykanka, waxaana ay soo jeedisay in gacmaha laga qabto 7-da Cishe ee ka harsan muddo xileedkiisa oo ku siman 20-ka Janaayo 2021.
“Dembiyo badan ayaa lagu heystaa, Dhammaantood waa kuwa salka ku haya in Madaxweynaha uu la shaqeeyay uuna dhiirrigeliyay in dowladda la soo weeraro, in ay ku dhintaan dad badan, in ay noqotay in saacado dhan lala wareego US Capitol. Waxaan aaminsannahay madaxweynaha in uu halis ku yahay dadka iyo dowladda” ayay tiri Ilhaan Cumar.
Sawir laga qaaday Kooxdii ka booday Gidaarka Capitol
Waxa ay Madaxweyne Trump ku eedeysay Xildhibaan Ilhaan Cumar in uu ka hadlay wax aan laga fileyn, in dadkii ka dambeeyay weerarka Capitol uu bartiisa Twitter ugu soo qoray “Waan idiin jeclahay” sida ay sheegtay Xildhibaanadda.
Trump waxaa saaraan Culeys siyaasadeed oo ay suuragal tahay in maanta oo Arbaco ah shaqada laga joojiyo, kadib markii Xildhibaannada Kongareeska ay ka caroodeen tallaabada aqalkooda ay u galeen Dadka careysan.
Waaxda Cadaaladda Mareykanka & Hay’adda dabagalka Dambiyada ee FBI-da loosoo gaabiyo ayaa bilaabay baaritaan wadajir ah oo ay ku raadinayaan dambiyada lagu soo oogay in ka badan 160 ruux oo loo heysto ka qaybgalka weerarka maanta todobaadka laga joogo.
Waa suuragal in kiiskaan uu majaha la galo shaqsiyaad qaar u dhaw ama katirsan Howlwadeennada Madaxweyne Trump, inkasta oo aan la xaqiijin Karin jiritaanka warkaan balse Warbaahinta & shaqsiyaadka ay u hadal hayaan.
Trump waxa uu horay u sheegay in uu qaadayo tallaabooyin uu ku cuuryaaminayo Madaxweynaha 46-aad ee Xilka kala wareegaya ee Joe Biden, waana tan keentay in Xaalad degdeg ah la geliyo Washington, kadib markii sirdoonka Mareykanka uu helay macluumaad la xiriira in rabshado ay dhici karaan inta lagu howlan yahay xil wareejinta.
Isha BBC Somali / Mustaqbal.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo kala diray Golaha deegaanka Gaalkacyo
Next articleMuxuu yahay welwelka Beesha Caalamka ee Doorashada Soomaaliya?